'विप्लव' मामलामा सरकार संवदनशील नभएको आरोप
‘विप्लव’ मामलामा सरकार संवदनशील नभएको आरोप
घटना र विचार, न्युज डेस्क V5months ago July 18, 2019
नेता लेखकले कांग्रेसकै पहलकदमीका कारण माओवादीसँगको वार्ता सफल भएको र मुलुक अहिलेको अवस्थामा रुपान्तरण भएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी हरहमेशा वार्ता तथा सम्वादको पक्षमा छ । हामी कहिल्यैपनि हत्या, हिंसाको पक्षधर होईनौं । त्यसैले विप्लवसँगपनि सरकारले वार्ता तथा सम्वाद गरोस् ।’
उनले वर्तमान सरकारसँग जनता सर्वथा निराश रहेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो सरकार कता जाँदैछ ? सरकारमा रहेका दलका नेताहरुनै अहिले सर्वथा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ उनले सरकारले देश र जनतामा निराशाको विउ छर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘त्यतिमात्रै होईन, सरकारका निर्णयहरु पनि विवादित बनेका छन् ।’ गुठी, मिडिया काउन्सिल, वन विद्येयकलगायतका सबै विद्येयकहरु विवादस्पद बनेकोमा उनले गुनासो पोखे ।
लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै नलिई जनतालाई गलत सुचना दिएको बताए । उनले भने,‘सरकारमा बसेका सबैभन्दा ठूला मान्छेले जनतालाई ढाँट्ने काम गरे ।’ सरकारले आफूलाई सुधार नगरे अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्नसक्ने पनि उनले खतरा औंल्याए । उनले भने,‘सरकार समयमै सुध्रियोस् ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट मैले धेरै पटक विप्लव समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता तथा छलफल गरेको छु । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता भएको छैन ।’
वर्तमान सरकारले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व चाहेको सुनाउँदै पाण्डेले भने,‘सरकार द्वन्द्व चाहँदैन् । हामी हिंसा चाहँदैनौं । हामी त सुशासन र समृद्धि चाहन्छौं । त्यही भएर सरकारले मेरै नेतृत्वमा ०७५ साल भदौ ०८ गते उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको थियो । मैले धेरै सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेर उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याएको छु । मेरो नेतृत्वको टोलीले विप्लवसँगमात्रै सहमति गर्न सकेको छैन् । अहिलेपनि म्याद सकिए पनि मैले वार्ताको पहल गरिरहेको छु ।’
सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि विप्लवका माग राजनीतिक समस्या भएकोले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो राजनीतिक समस्या भएकोले यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । अहिले नेकपा र डबल नेकपाबीच एक आपसमा सौताकोजस्तो व्यवहार देखिएको छ । यो व्यवहार त्यागेर छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्छ ।’
सांसदसमेत रहेका सह–अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले परिवर्तित अवस्था भएकोले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरिएको छ कि छैन ? भन्ने कुरा मूल प्रश्न भएको सुनाए । यता, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सरकार र विप्लव समूहबीच ठोस वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘विप्लवसँग वार्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले आजभन्दा करिब २ महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं । यसको लागि सुन्दरमणि दिक्षितले पहलकदमी लिनुभएको थियो ।’ तर, पछिल्लो समय वार्ताले औपचारिकता पाएको हल्ला चलाईएको भनेर स्वयम विप्लव समूहले गरेको पनि उनले सुनाए ।
केसीले माओवादीले छोडेका एजेण्डा अहिले विप्लवले बोकेको सुनाए । उनले भने,‘यदि विप्लवले पनि यो एजेण्डा छोड्यो भने सिप्लव जन्मिन्छ ।’ मुलुक एकपछि अर्कोगरि बेथितीको चंगुलमा फसेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।